यस्तैलाई भन्छन् र गाउँगाउँमा सिहंदरबार ? « Postpati – News For All
भुवन केसी पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
स्थानीय तह आएपछि हामीलाई फाईदा के ? यो प्रश्नले मनमा बारम्बार घोच्यो मन थाम्न सकिएन लेख्न मन लाग्यो । अझै कुरा गर्ने हो भने गाउँगाउँमा सिहंदरबारको अर्थ के ? कस्तालाई भन्छन् हजुर यो गाउँगाउँमा सिहंदरबार मैले त बुझ्नै सकिन । साच्चिकै पुगेकै छ त हजुर सोझा सिधा गरिब दुखी जनताको घर-घरमा सिहंदरबार ? अह मलाई त पटक्कै चित्त बुझेन । यस्तैलाई भन्छन् र गाउँगाउँमा सिहंदरबार ?
घर-घरमा सिहंदरबार आउथ्यो त तीन/चार घण्टा हिडेर खाद्यान्न जुटाउन जानुपर्ने थिएन होला, भोक-भोकै बाच्नु पर्ने थिएन होला, सम्भावना प्रशस्तै हुदाहुदै जनताहरु अध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुने थिए होला, फोन गर्नलाई डांडाकाँडा घाम लाग्ने ठाउँ खोज्दै धाउनुपर्ने थिएन होला, स्कुल/कलेज खोज्दै शहर बजार घुम्नु पर्ने थिएन होला, कोहि कसैले पनि अस्पताल नपुगी अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन होला ।
खासगरि जनताहरुले चाहिएको यिनै सुबिधा होइन र ? अनि यी सुबिधा नै नपुगेका ठाउँहरुमा कसरी पुग्ला र हजुरहरुको सिहंदरबार ? सुन्दा नि अचम्म लाग्छ जहाँ अहिलेसम्म सडक पुगेकै छैन, बिधुत सुबिधा छदैछैन, इमेल ईन्टरनेटका त कुरै छोडौ, फोनले नि काम गर्दैन, अन्य बिकासको त झन् के कुरा गरौं र !
स्थानीय तह आयो अब त सबैलाई सुबिधा हुन्छ भन्थेउ त महाराज ! खै के भयो त हामीलाई त्यस्तो सुबिधा ? हिडेर गाउँपालिका आउन ५/६ घन्टा समय लाग्छ, घरबाटै फोन गरेर केहि कुरा बुझौं भने कर्मचारीको फोन उपलब्ध हुन सकेन भन्छ । एउटा गाउँपालिका कार्यालय त उपयुक्त ठाउँमा राख्न सकेनौ महाशय अब कसरी गर्लान जनताहरुले तिम्रो बिश्वास ? न देखिन्छन् तिम्रा कर्मचारीहरु सन्तुष्ट, न देखिन्छन् जनताहरु सन्तुष्ट के काम गर्छौ र सबैको मन यसरी दुखाउछौ महाशय ? यो पटक मात्रै हो र तिमिहरुले नेतृत्व गर्ने ?
स्थानीय तह भएपछि जे फाईदा भयो तिमीहरूलाई भयो । किनकि तिमीहरुले कमायौ, तिमीहरू नै रमायौ, तिमीहरूले नै लियौ ठेक्का, तिमीहरुले नै हिनामिना गर्छौ, अनि कहाँबाट हुन्छ जनताहरुलाई सुबिधा ? कहाँबाट हुन्छ हाम्रो बिकास ? केहि रोजगार खुले तिम्रै छोराहरुले पाए, केही अवसर आए तिम्रै छोरीबुहारीले खाए, जेजे आए तिम्रै नाता गोता इष्टमित्र, आफन्त जत्तिले पाए ।
यो स्थानीय तह तिम्रै निजी कम्पनी हो र महोदय ? यही हो त जनताको लागि आएको सिहंदबार लाज मानुपर्ने होइन र बोल्न ? हुनत अरु के नै थियो र तिमीहरुको क्षमता, नपढेका थियौ, न थियोे तिम्रो योग्यता, न त बनाउन सक्यौं अहिलेसम्म केहि क्षमता । त्यसैले त गर्छौ होला यस्ता अनैतिक कार्यहरू, योग्यता भएकाहरुको अपमान गर्छौ, राम्रोलाई फाल्छौ नराम्रोलाई पाल्छौ, आफ्नोलाई राख्छौं के चिन्छौ र बिचरा राम्रा मान्छेहरु । गरिब दुखिको छोराछोरीलाई साइड लगाउछौ, हुनेखाने ठुलाठाली र तिम्रा कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई छनोट गर्छौ । बिचरा गरिबको छोराछोरीको मेहनतलाई कहिले बुझेका छौ ? कहिले आउछन महाशय अब तिम्रा सकारात्मक सोच ? कहिले गर्छौ अब सबैलाई सम्मान ब्यवहार, कहिले दिन्छौं सबैलाई निश्पक्षपुर्ण न्याय, कहिले गर्छौ चौतर्फी बिकास ? तिम्रो आश गर्दागर्दै सबैको भैसक्यो बेहाल, कहिल्यै स्थिर हुने भएन हजुर हाम्रो देशको सरकार । जय देश जय राजनीति !!
भुवन केसी गंगादेब गाउँपालिका ६ रोल्पा निवासी हुनुहुन्छ ।